Faddarayn bayooloji: maxay tahay, sifooyinka iyo noocyada | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 16/09/2021 14:04 | Deegaanka
Waxaan ognahay in meeraheena ay jiraan noocyo badan oo wasakh ah oo ay ugu wacan tahay bani aadamka taas oo, iyadoo dhaqdhaqaaqyadooda dhaqaale, hoos u dhigaya deegaanka. Mid ka mid ah noocyada nabaad -guurku waa faddarayn bayooloji. Waa mid ay sababaan nooleyaal meerto nololeed cayiman oo degi kara deegaanno uu xaalufin karo hawo, biyo, ciid iyo cunto labadaba.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato faddaraynta noolaha, waxa asalkiisu yahay iyo cawaaqibkiisa.
1 Waa maxay faddarayn bayooloji
2 Sunta wasakhaysan ee noolaha
3 Sababaha iyo cawaaqibta
4 Ka -hortagga faddaraynta noolaha
Waa maxay faddarayn bayooloji
Faddaraynta noolaha waxaa sababa nooleyaal leh meerto nololeed cayiman, hawshan, si ay u fuliyaan wareeggaan, waxay ku nool yihiin jawi hoos u dhigi kara tayada hawada, biyaha, ciidda iyo cuntada, taasoo ka dhigan khatar weyn oo noolaha. Wuxuu keenaa cudurro faafa ama dulin ah. Sidaa darteed, marka noolaha noocan ahi uu waxyeello u geysto bay’ada aan kor ku soo sheegnay, faddarayn bayooloji ah ayaa dhacda taas oo waxyeello u geysata nooleyaal badan oo khayraadkaas u adeegsada wareegyadooda nololeed.
Ka mid ah noolaha keena faddaraynta noolaha, waxaan iftiiminaynaa:
Noocyada faddaraynta noolaha
Iyadoo ku xiran meesha iyo nooca noolaha keena faddaraynta, waxaa jira noocyo kala duwan. Aynu aragno kuwa ugu waaweyn:
Faddaraynta noolaha ee biyaha: biyuhu waxay ka koobnaan karaan inta badan maadada orgaanigga ah ee dillaacday iyo jeermiska noolaha ee ka yimaada bullaacadaha, hawlaha beeraha, ama dheecaannada warshadaha.
Wasakhowga hawada noolaha: Wasakhowga hawada bayooloji ayaa meel walba lagu arki karaa, ha ahaato gudaha iyo dibaddaba. Dadka iyo duunyaduba waxay ka tagaan fayrasyo ​​iyo bakteeriyo saamayn karta dadka iyo xayawaanka kale. Hawo -qaadashada oo liidata ama qoyaan qaraabo ah ayaa ah qodobbada gacan ka geysta koritaanka wasakhda noolaha.
Faddaraynta noolaha ee ciidda: Bakteeriyada iyo fayrasyada ayaa waliba sii xumayn kara ciidda, maxaa yeelay waxay kaloo heshaa qashinka guriga, hawlaha xoolaha, bullaacadaha, iwm.
Faddaraynta noolaha ee cuntada: Cuntada waxaa saamayn kara wasakhda bayoolojiga Sumeeyayaasha bayooloji waa nooc kasta oo noole ah oo wax ka beddeli kara halabuurka cuntada si uusan u noqon mid ku habboon isticmaalka.
Sunta wasakhaysan ee noolaha
Faddaraynta bayoolojiga waxaa sababi kara wasakheyaal kala duwan oo noolaha, kuwaas oo loo qaybin karo:
Bakteeriyada: cudur-sidaha ayaa sababi kara cudurro sida oof-wareenka ama cudurrada la xiriira cuntada sida Salmonella.
Protozoa: Waxay yihiin jeermisyo unicellular fudud oo sababa cudurrada dadka. Cudurro badan oo uu sababo protozoa waa duumada, amoebiasis, iyo jirrada hurdada.
Fayrasyada: Wakiil faafa oo aan lahayn unug oo ku koraa kuna kobca unugyada noolaha kale. Waxay sabab u yihiin cuduro badan oo dhirta, xayawaanka iyo dadka, iyo sidoo kale AIDS, cagaarshow, furuq ama jadeeco.
Helminths: Waa dirxi-nool-nool ama dulinka dadka oo aan ku tarmin karin bini-aadamka marka uu weynaado. Kuwani waxay sababi karaan cudur, tusaalooyinka qaarkood waa dirxiga, gooryaanka ama diirka.
Mushroom: Sababtoo ah fungi ma soo saari karo nafaqo u gaar ah, waxaa lagu qasbay inay ku dul nooleeyaan noolaha. Mararka qaarkood fangaskaasi waxyeello ma laha mana keeni doono nooc kasta oo caabuq ah. Si kastaba ha noqotee, fangaska cudurada faafa wuxuu saamayn karaa xubin kasta, laakiin waxa ugu badan waa caabuqyada dusha sare sida maqaarka ama ciddiyaha.
Arthropods: Arthropods, caarada ayaa sababi karta cudurrada maqaarka sidoo kale waxay noqon kartaa isha xasaasiyadda. Isnadaamiska waa cudur maqaarka ku faafa oo ay sababaan caarada isnadaamiska.
In kasta oo aan sidoo kale tixgelin karno inaan u kala qaadno wasakhda noolaha afar kooxood iyadoo loo eegayo tusmada halista caabuqa:
Kooxda 1: Kooxdan waxaa ku jira wakiilada noolaha kuwaas oo aan u badnayn inay sababaan cudur dad.
Kooxda 2: Si kastaba ha ahaatee, tan waxaa ka mid ah cudur -sidayaasha noolaha oo sababi kara cudur bani -aadam, in kastoo ay jiraan daaweyn wax -ku -ool ah oo lagu daweeyo oo aanay si fudud u faafin.
Kooxda 3: Jeermiska noolaha ee kooxdan ayaa sababi kara jirro halis ah oo faafi kara, laakiin guud ahaan waxaa jira daaweyn waxtar leh. Bakteeriyada keenta tiibishada ama cagaarshow ama HIV waa tusaale.
Kooxda 4: kooxdani waa cudur -sidaha ugu halista badan, si fudud ayuu u fidaa, guud ahaanna ma jiro daaweyn wax -ku -ool ah.
Sababaha iyo cawaaqibta
Faddaraynta noolaha waxaa sababa dheecaanka wasakhaysan ee ku jira xaalad adag, dareere ama gaas leh. Waxay badanaa ka yimaadaan hababka ka dhaca hababka soo socda:
Noocyada kala duwan ee warshadaha.
Wax soo saarka cuntada.
Shaqada nadaafadda, gaar ahaan isbitaallada.
Ka saar haraaga
Hawl kasta oo xiriir la leh noolaha.
Waa in la tixgeliyaa in xaaladaha sida joogitaanka nafaqooyinka, huurka iyo heerkulka ay tahay in la buuxiyo si loo fududeeyo hawsha wasakheynta noolaha.
Marka la soo koobo, wasakhaynta noolaha ayaa sababtay cuduro tiro badan nooc kasta oo noolaha ah, aad bayna u kala duwan yihiin. Waad ku mahadsan tahay horumarka xagga daawada, maanta waxaan daaweyn karnaa inta badan cudurrada ay sababaan wasakhowga noolaha. In kasta oo wasakhowga cusubi soo muuqdo, had iyo jeer ma fududa in lala macaamilo ama la helo hab ka -hortag ama daaweyn.
Mawduucani waa in laga fiirsado muhiimadda ay leedahay in wasakhaynta deegaankeenna sida ugu yar ee suurtogalka ah, maxaa yeelay waxay ku xidhan tahay meesha aad ku nooshahay iyo awooddaada dhaqaale, way kuu sahlan tahay inaad hesho daaweyn aad cudurka ku wajahdo.
Ka -hortagga faddaraynta noolaha
In kasta oo jeermisyada ay adag tahay in la xakameeyo, haddana xaqiiqdu waxay tahay in faddaraynta noolaha la iska ilaalin karo iyadoo la qaadayo tallaabooyinka soo socda:
Nadiifi oo jeermiga jeermiska ka nadiifi in aan isticmaalno iyo meesha aan ku nool nahay.
Qabso oo si habboon u maaree qashinka ka soo baxa guryaheena, xafiisyadayada ama shaqadayada, iskana ilaali inaad si toos ah ula xiriirto.
Ku tuur qashinka dabiiciga ah weelasha loogu talagalay.
Inta lagu jiro maalinta shaqada, labadaba xafiiska iyo goobta, waa in la dhawro tallaabooyinka nadaafadda habboon.
Baadhitaannada jirka ee xilliyeed si looga fogaado fayrasyo ​​ama caabuqyo xitaa saamayn kara dadka ama xayawaannada nagu xeeran.
Tababar oo ku dhiiri geli shaqaalaha inay u hoggaansamaan tallaabooyinka fayadhowrka ee shirkadda.
Bar carruurta ku saabsan nadaafadda iyo ka -hortagga cudurrada.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto faddaraynta noolaha iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Faddaraynta noolaha